AU အဓိက ပါဝါ တိုးချဲ့မှု ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - လက်ကားရောင်းအား စိတ်ကြိုက် မြင့်သည် အရည်အသွေး AU အဓိက ပါဝါ တိုးချဲ့မှု - Bohao
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > တိုးချဲ့မှု ကြိုး > သြစတြေးလျ တိုးချဲ့မှု ကြိုး > AU အဓိက ပါဝါ တိုးချဲ့မှု
ငါတို့ ထောက်ပံ့ရေး AU အဓိက ပါဝါ တိုးချဲ့မှု ၏ မြင့်သည် အရည်အသွေး နှင့် SAA ခွင့်ပြုချက်။ ငါတို့ ကျိန်စာ ကိုကို သို့ တိုးချဲ့မှု ကြိုး အများကြီး နှစ်ပေါင်းဖုံးအုပ် အများဆုံး ၏ ဥရောပ နှင့် အမေရိကန် စျေးကွက်။ ငါတို့ ဖြစ်ကြသည် မျှော်လင့်ပါတယ် သို့ ဖြစ်လာသည် မင်းရဲ့ ရေရှည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွင် Chတွင်a.
AU Mains Power Extension ၏နိဒါန်း ၁
2. ကုန်ပစ္စည်း Parameter (သတ်မှတ်ချက်) ၏ AU Mains ပါဝါတိုးချဲ့မှု
သြစတြေးလျ3ဝါယာကြိုး Plug
၃။ ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင်နှင့် AU Mains Power Extension ကိုအသုံးပြုခြင်း
အကွာအဝေးကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များသို့ပိုမိုလွယ်ကူစွာဝင်ရောက်နိုင်မှုတို့အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောရှည်လျားသောအရောင်တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး၊ အိမ်သုံးအတွက်အိမ်၊ အိမ်ပြုပြင်ရေးနှင့်အိမ်ပြင်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ သင်၏လျှပ်စစ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု၊ ချဉ်စက်၊ စက်ဆပ်စက်သို့မဟုတ်အခြားပါဝါကိရိယာများကိုတပ်ဆင်ရန်တိုးချဲ့ကြိုးကို သုံး၍ သင်၏အလုပ်နေရာကိုလွယ်ကူစွာရွှေ့ပါ။ နှင့်ပိုပြီး။ အမျိုးသမီး connector သည်ကိရိယာ၏ပါဝါကေဘယ်လ်နှင့်တွဲထားသည်။ အထိုင် connector သည် standard outlet တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်သည်။ တိုးချဲ့ခြင်းကြိုးသည်မြက်ခင်းစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရွေ့လျားမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်စေရန်နှင့်နောက်လာမည့်စုရုံးမှုအတွက်အိမ်နောက်ဘက်ကိုပြင်ဆင်ရန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖိအားအဝတ်လျှော်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်မြက်ရိတ်စက်နှင့်ပေါင်းပင်များခုတ်လှဲခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
4. AU Mains Power Extension ၏ထုတ်လုပ်မှုအသေးစိတ်
AU Mains Power Extension Lead Cord သည်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်များဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အလွယ်တကူညှိနှိုင်းနိုင်ရန်အတွက်လာသည်။ တိုးချဲ့ခြင်းကြိုးကိုလည်းအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ လိုအပ်သောအရှည်ပမာဏနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန် ၁ မီတာ၊ ၃ မီတာ၊ ၅ မီတာ၊ ၁၀ မီတာအရှည်၊ ၂၀ မီတာ (သီးခြားစီရောင်းသည်) မှရွေးချယ်ပါ။
AU Mains Power Extension ၏ ၅.Product Qualification
6. AU ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးချဲ့ခြင်း
hot Tags:: AU အဓိက ပါဝါ တိုးချဲ့မှု, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, လက္ကား, စိတ်ကြိုက်, မြင့်သည် အရည်အသွေး, အခမဲ့ နမူနာ, တွင် စတော့ရှယ်ယာ, လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း